Kurwisa nezvombo chakaitwa musi Canadian Crypto Exchange - Blockchain News
Ndira 25, 2018 arun
Kurwiswa nezvombo Canadian Crypto Exchange
musi weChipiri, Ndira 23, 2018, kumativi 11 ndiri, makororo matatu vakazvigadzirira vakapinda Canadian BitCoins muhofisi Ottawa akairwisa nhengo ina Exchange. Kuva kwakabatana navo uye kutyisidzira aine pfuti, vemhosva akabvunza kuti uchatamisa mari yacho exchange kwavari. mushandi The cheshanu, vakaramba kucherechedzwa, akadana mapurisa, uye makororo vakatiza nechinhu.
Mumwe yevaifungidzirwa, mugari-makore 19 of Ottawa, akaiswa mujeri. Chaaipomerwa kupamba pamwechete kushandisa pfuti uye kumanikidza chengetedzo. The Ottawa mapurisa vari kutsvaka mamwe vechikamu vaviri mhosva.
The Canadian reShanduro CBC News mishumo kuti makororo vakatsvaka mari panguva crypto Exchange.
Izvi hazvisi kurwiswa wokutanga yokuisira ose Cryptocurrency. In November, mugari New Jersey, Louis Metz, Vakarwisa muridzi nhepfenyuro. Kutyisidzira pfuti, akazvitora omuJudha runharembozha uye private makiyi, raaishandisa kuwana digitaalinen chikwama. Semagumo, zvayakaba munhu $ 1.8 miriyoni crypto mari. Mutadzi anotarisana kusvika 25 Makore ari mujeri.
Why I Believe In Bitcoin. Sei ...
Previous Post:Blockchain News 25 Ndira 2018
Next Post:The yemasvomhu vakaverenga mutengo bitcoin nokuda 2018